Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Sabti Ah Ay Qoreen Wargeysyada Caalamku | Dhexnimo Media
Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Sabti Ah Ay Qoreen Wargeysyada Caalamku
Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Napoli, Aurelio de Laurentiis ayaa sheegay in difaaca reer Senegal ee Kalidou Koulibaly oo 29 jir ah uu xagaagan kaga tegi doono kooxdiisa qiimaha ku habboon, waxaana saxeexiisa ku hirdamaya Manchester United iyo Manchester City. (TalkSport)
Manchester City waxay diyaarinaysaa dalab
£66 milyan oo Gini xambaarsan oo ay toddobaadka dambe ka gudbinayso Koulibaly. (Inside Futbol)
Saxeexa cusub ee Chelsea ee Kai Havertz oo ah 21 jir u dhashay Jarmalka, waxa inta ugu badan dabada ka riixayay mulkiilaha Blues ee Roman Abramovic marka la barbar-dhigo sida uu ugu dedaalay tababare Frank Lampard. (Express)
Weeraryahanka Jarmalka ah ee Timo Werner oo 24 jir ah, waxa uu iska diiday fursad uu ku tegi karayay Manchester City, kaddib markii uu Pep Guardiola telefoonka kula hadlay ka hor intii aanu Chelsea tegin. (Mail)
West Ham waxay dalab £20 milyan oo Gini xambaarsan ay ka gudbisay difaaca reer England ee kooxda Burnley ee James Tarkowski oo 27 jir ah. (Sky Sports)
Barcelona waxay heshiis shaqsi ah la gaadhay garabka weerarka xulka qaranka Netherlands iyo kooxda Lyon ee Memphis Depay oo 26 jir ah. (Teamtalk)
Tababarihii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa ka jawaabay hadallo sheegaya in aanu waligii tababari doonin Barcelona sababtoo ah, xidhiidhka fiican ee uu la leeyahay kooxda ay xafiiltamaan ee Espanyol oo uu hore usoo layliyey. (Sun)
Manchester United waxay gebi ahaanba joojisay isku-daygii ay ku doonaysay weeraryahanka Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, kaddib markii ay dareemeen in kooxda reer Germany ay qiimaha 20 jirkan cirka ku laashay. (Star)
Manchester United ma doonayso inay hoos u dhigto qiimaha difaaca reer England ee Chris Smalling oo ah 30 jir ay ku qiimaysay £18 milyan oo Gini, waxaana la filayaa in Roma ay heshiis rasmi ah kula wareegto. (Corriere Dello Sport)
Laacibka garabka weerarka uga ciyaara xulka Scotland ee Ryan Fraser ayaa yimid Tyneside xilli ay wada hadallo u socdaan Newcastle United. 26 jirana ayaa koox la’aan ahaa tan iyo markii uu ka tegay Bournemouth dhamaadka xili ciyaareedka. (Sky Sport)
Arsenal ayaa u bandhigtay Atletico Madrid inay la wareegto labada ciyaaryahan ee Matteo Guendouzi iyo Alexandre Lacazette ayna ugu beddelaan laacibka khadka dhexe ee Thomas Partey. (Mirror)
Dalabkii Tottenham ay ka gudbisay 20 jirka khadka dhexe uga ciyaara Barcelona ee Lucas de Vega ayaa lasoo diiday, inkasta oo De Vega uu doonayo inuu ku biiro Spurs. Barcelona waxay doonaysaa in da’yarkeedani ka ciyaaro kooxda koowaad xili ciyaareedka dambe. (Sport)
Leeds United waxay wada-hadallo kula jirtaa Feyenoord oo ay ka doonayso weeraryahanka Crysencio Summerville, iyadoo la sheegayo in kooxda reer Netherlands ay u o0golaatay 18 jirkan inuu tago Elland Road. (Leeds Live)
Barcelona waxay ku qanacsan tahay inay Liverpool kala soo saxeexan doonto Georginio Wijandlum oo 29 jir ah. (Goal).
Previous articleMaxaa kasoo baxay Kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe yeesheen ?
Next articleHadal ka soo yeedhay Trump oo caro xooggan ka dhaliyey gudaha Maraykanka